Usizo & FAQ - loveofqueen
Ikhaya / Usizo & FAQ
Uma usuphethe izinto ozifunayo ku-Bag yakho, mane uchofoze inkinobho ethi 'Hlola'. Khona-ke uzobe ususwe ukuba ungene ngemvume ku-akhawunti yakho noma wenze i-akhawunti. Okulandelayo, khetha indlela oyithandayo yokuthumela bese ufaka noma yimiphi amakhodi esaphulelo noma ama-credit vouchers ongafuna ukuyisebenzisa. Ekugcineni, uzoqondiswa ekuqedeni ukukhokha. I-imeyili yokuqinisekisa izothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili elibhalisiwe eliqukethe okuqukethwe kwe-oda yakho!
Ngisanda kufaka i-oda. Uphi i-imeyili yami yokuqinisekisa?
Sicela uvumele amahora we-24 ukuze i-imeyili yakho yokuqinisekisa itholakale ebhokisini lakho lokungenayo le-imeyli elibhalisiwe. Sincoma ukuhlola ifolda yakho ye-Junk / Spam yakho. Uma ungatholi i-imeyili yokuqinisekisa ngaphakathi kwalesi sakhiwo sesikhathi, mane uthumele i-imeyili kithi.
Uma umlayezo wephutha uqhubeka ukwenzeka kwinqubo yakho yokuhlola, kaningi kunenkinga yekhadi lesikweletu, noma isici ngekheli lokukhokha noma lokuthumela ozama ukuyisebenzisa. Ukuze ulungise leli phutha, zama ukuphinda uphinde ufake amagama namakheli kulwazi lakho lokukhokha noma lokuthumela. Uma umlayezo wephutha uqhubeka uqhubeka, sicela u-imeyli kithi.
Uthole i-oda engisanda kubeka?
Ngemuva kokubeka i-oda lakho ku-loveofqueen.com, i-imeyili yokuqinisekisa izothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili uma selicutshungulwe. Uma ungatholi i-imeyili yokuqinisekisa noma i-oda lakho alibonakali ekhasini lakho le-akhawunti, sicela ubhale i-imeyili kithi.
Ngingakwazi ukukhansela / ukwenza izinguquko ku-oda engisanda kubeka?
Kungenzeka ukuthi wenze ushintsho ku-oda lakho ngaphakathi kwamahora we-3 wokubeka futhi uma i-oda ingazange lisetshenziswe. Senza izinqubo ngokushesha, ngakho izinguquko nokukhansela akukwazi ukugcwaliseka ngaso sonke isikhathi. Kumele usibhale masinyane ushintsho lwakho / imininingwane yokucela ukukhansela ifakwe ku-imeyili. Lokhu kuzonciphisa ukulibaziseka kokucubungula nge-oda yakho ngenxa yokwenza izinguquko.
Ngingayithuthukisa kanjani ikheli lami lokukhokha?
Kungenzeka ukubuyekeza ikheli lakho lokukhokha ngokungena ku-akhawunti yakho bese ukhetha ithebhu 'I-Akhawunti Yami' ekhoneni eliphezulu ngakwesokudla. Qhubekela kuthebhu ethi 'Imininingwane' lapho ungakwazi khona ukuvuselela ikheli lakho lokukhokha njengoba kudingeka. Sicela uqaphele ukuthi ukushintsha ikheli lakho lokukhokha akubuyekezi ikheli lakho lokuthumela. Zonke izinguquko zekheli lokuthumela kufanele zenziwe ngaphakathi kwehora le-1 lomyalelo obekwa nge-imeyili usitshele izinguquko ekhelini lakho lokuthumela kuphela kuphela uma i-oda lakho lingathunyelwa.
Zonke ubukhulu bezingubo zethu zihambisana netafula elijwayelekile le-US njengobukhulu Ishadi lokubamba.Ukuze ukhethe usayizi ofanele, ungakala ucezu lwezingubo ozigqoke ngezinto ezifanayo. Isibonelo, uma ingubo yenziwe ngezinto ezibonakalayo, ungakwazi ukulinganisa izingubo zokugqoka ngezinto ezithintekayo. Uma unemibuzo ethile mayelana nosayizi, sicela usithumele i-imeyili.
Kubonakala sengathi ikhadi lami likhokhiswe kabili. Kungani?
Okungenzeka ukuthi ubona ukugunyazwa. Lokhu kuyindlela ejwayelekile yokuphathwa kwekhadi lokuthenga ngesikweletu ukuze kuqinisekiswe ukuthi imali ekhona neqiniso le-akhawunti. Lokhu kugunyazwa kuzosula futhi uzobona inkokhelo eyodwa ye-oda oyifakile. Sicela uqaphele ukuthi ibhange lakho lingathatha amahora angu-48 ukususa ukugunyazwa. Uma udinga usizo lokusheshisa inqubo ungaxhumana nebhange elikhishwayo ekhadini lakho lesikweletu.
Ngingakwazi ukukhansela i-oda lami ngaphandle kokukhokhiswa?
Yonke imiyalo ekhanseliwe ngaphambi kokuba ithunyelwe izobuyiselwa ekhadini lakho lesikweletu. Ngeshwa, asikwazi ukukhansela i-oda ngemuva kokuthi sesithunyelwe.
Kungani kufanele ngidale i-akhawunti?
Ngingabheka kanjani isimo se-oda lami?
Vele ungene ngemvume ku-akhawunti yakho bese ukhetha "Buka isimo sami se-oda". Ngokwenza lokhu, ungabheka isimo se-oda lakho bese ubona ukuthi iphakethe lakho lithunyelwe yini.
Uphi i-oda yami? Angizange ngithole okwamanje?
Uzothola i-imeyili yokuqinisekisa uma i-oda lakho lithunyelwe ngolwazi lwakho lokulandela. Uma ungatholi i-imeyili yokuqinisekisa yokuthumela, sicela uhlole ifolda yakho ye-Junk Mail noma Spam, njengoba kungenzeka ukuthi yamukelwe khona.
Kuthiwani uma into engiyithandayo ingathengiswa ngosayizi wami?
Ungavame ukuphequlula esitolo sethu, ngoba uma izinto ezilodwa zithengisa kahle, singangezela ubuningi bokugcina.
Ngingumthengisi, ngingathanda ukuthenga izingcezu eziningi zento yakho, yimuphi inani lentengo?
Sawubona, ngiyabonga ngokubuza kwakho, uma ungathanda ukuthenga inani elikhulu, sicela uthumele i-imeyili kithi, sizokunikeza intengo engcono, siyabonga!
Uzophendula nini umbuzo wami?
Wonke ama-imeyili azophendulwa phakathi nosuku lwebhizinisi le-1. Uma ungatholi impendulo yethu, sicela uphinde uthumele i-imeyili ngomusa futhi sizokuphendula ngokushesha ngangokunokwenzeka.